China MS Plain Weave Wire Mesh fekitari uye bhizimisi | Ansheng
Plain simbi, inozivikanwawo secarbon simbi, isimbi yakashandiswa zvakanyanya muwaya mesh indasitiri. Iyo inonyanya kugadzirwa nesimbi uye shoma kabhoni. Kuzivikanwa kwechigadzirwa kunokonzerwa nemutengo wayo wakaderera uye kushandiswa kwakawanda.
Plain waya pajira riya.
Plain simbi waya mesh yakasimba uye yakasimba. Iyo yakasviba muvara ichienzaniswa neyakajeka aluminium kana isina simbi meshes. haina kuramba ngura uye ichaita ngura munzvimbo zhinji dzemuchadenga. Iko nekuda kweizvi, pachena simbi waya mambure dzimwe nguva inoshandiswa senzira inoraswa.
Zvishandiso: yakajeka simbi waya waya pajira rinonyanya kushandiswa mukusefa kwerabha, plastiki, peturu uye zviyo indasitiri Pane zvakawanda zvimwe zvinoshandiswa zvakare. General makondirakiti vanoshandisa mesh ye: infill mapaneru, mawindo mawindo, shaker skrini, akafukidza madziro, uye makabati. Vagadziri vemota vanoshandisa yakajeka simbi waya mesh yegrill uye radiator inovhara, mafuta strainers, uye mafirita madhizaini. Iyo indasitiri yezvekurima inoshandisa yakajeka simbi mesh yemachina nemidziyo magadhi pamwe nekuparadzanisa uye kusefa.
Rakarukwa Type: Plain Weave uye Dutch Weave uye herringbone kuruka.
Pashure: Stainless Simbi Wire Mesh
Zvadaro: Kwakakurudzira rakarukwa Wire Mesh